'Girls Planet 999' လိုဘဲ “Boys Planet” ပြုလုပ်သွားမယ်လို့ 2021 MAMA ပွဲမှာ ကြေငြာ
ဒီနှစ်နှောင်းပိုင်းလောက်မှာ Mnet ရဲ့ “Girls Planet 999” survival program ဟာ အထူးရေပန်းစားခဲ့ပြီး တကမ္ဘာလုံးက ပရိတ်သတ်တွေဟာ သူတို့ကြိုက်တဲ့ ပြိုင်ပွဲဝင် အနိုင်ရဖို့ အပြိုင်အဆိုင် vote ပေးခဲ့ကြပါတယ်။ Program ရဲ့ သဘောတရားက K,C,J နိုင်ငံပေါင်း ၃ နိုင်ငံက လာပြိုင်ကြတဲ့ မိန်းကလေး ၉၉ ယောက်ထဲက ၉ ယောက်ကို ရွေးပြီး debut ပေးတာ ဖြစ်ပါတယ်။
နောက်ဆုံးမှာ ပရိတ်သတ်တွေနဲ့ ဒိုင်တွေ စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်ထားတဲ့ ၉ ယောက်ဟာ “Kep1er” အဖွဲ့ဆိုပြီး 2022 ခုနှစ်မှာ ပွဲဦးထွက်တော့မှာပါ။ အစက ဒီလကုန်မှာ debut ပေးဖို့ စီစဉ်ထားပေမဲ့ staff တွေထဲက တစ်ယောက် covid ဖြစ်လို့ Debut ဖို့ plan နောက်ရွေ့လိုက်ရပါတယ်။ သို့သော်လည်း ထို “Kep1er” အဖွဲ့ဟာ debut မလုပ်ရသေးပေမဲ့ ကြော်ငြာတွေ၊ variety show program တွေ စရိုက်ေနေပါပြီ။
Instagram acc ဖွင့်တာတောင် ခဏလေးနဲ့ follower တွေအများကြီးရရှိခဲ့ပါတယ်။ပရိတ်သတ်တွေကလည်း “GirlsPlanet 999” လိုမျိုး ယောင်္ကျားလေး version နဲ့ ထပ်လုပ်ဖို့ တောင်းဆိုနေကြပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ Mnet က December 11 ရက်နေ့မှာ ကျင်းပခဲ့တဲ့ “2021 Mnet Asian Music Awards (MAMA)” ပွဲကြီးမှာ 2022 ခုနှစ်မှာ တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မဲ့ “Boys Planet” အကြောင်း surprise ဆန်ဆန် ကြေငြာခဲ့ပါတယ်။
Trailer ကတော့ “ဂြိုလ်ကမ္ဘာအသစ်ကနေ signal တွေပြနေပါတယ်…. Global ခရီးစဉ်ကြီးတစ်ခုကို ကျွန်တော်တို့နဲ့ အတူသွားဖို့ တက်သစ်စ ယောင်္ကျားလေးတွေကို စောင့်မျှော်နေပါတယ်” ဆိုပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ ကဲ ကောင်လေးချောချောလေးတွေကို မျှော်နေကြပြီလား ပရိတ်သတ်ကြီးရေ။ Girls Planet လို Korea, Japan, China က ကောင်လေးတွေဘဲ စုစည်းယှဉ်ပြိုင်ခိုင်းမလား ဒါမှမဟုတ် နိုင်ငံအသစ်က ကောင်လေးတွေပါ ထပ်ခေါ်မလားဆိုတာတော့ စောင့်ကြည့်ချင်စရာပါဘဲနော်….
[MEDIA] Mnet has dropped the introduction trailer for Boys Planet 2022.
“We are looking forward to the boy who will go onajourney to becomeaglobal idol.” #BoysPlanet2022 #BoysPlanet #MNET #보이즈플래닛 #엠넷
— BOYS PLANET 2022 (@BP2022UNITED) December 11, 2021
Previous post ဝမ်းနည်းလာတဲ့အခါ ချစ်ရသူက ဘာလုပ်ပေးဖို့လိုအပ်သလဲ.. Yang Yang ရဲ့ အဖြေက…
Next post ကျန်းမာပြီး သွယ်လျတဲ့ ခန္ဓါကိုယ်​လေးကို တသမတ်တည်း ထိန်းထားနိုင်ဖို့ Jennie လုံးဝမစားတဲ့ အစားအစာတစ်ခု